အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် stanozolol အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ | Steroid တစ်မျိုးအမှုန့် AASraw
အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် stanozolol အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?
/ဘ‌‌လော့ခ်/Stanozolol/အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် stanozolol အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?
အပေါ် Posted 10 / 28 / 2017 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Stanozolol.
Stanozololလည်း Winstrol ကိုခေါ်အများဆုံးလူသိများတဲ့ steroids တဦးဖြစ်ပါသည်, သွေးအားနည်းဆက်ဆံပါနှင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်ကကျယ်ပြန့်အထူးသဖြင့်အတွင်း, အားကစားအတွက်အသုံးပြုသည် ကာယဗလ။ Winstrol လုံခြုံစွာယောက်ျားမိန်းမတို့ကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည် မီးလောင်သောအဆီ stanozolol 50mg, stanozolol 100mg, stanozolol အရည်, stanozolol Tablets, stanozolol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်: ဈေးကွက်ထဲမှာ stanzolol ၏ .Normal အထူးပြုများသောအားဖြင့်ထိုးဆေး stanozolol, ပါးစပ် stanozolol ဖြစ်ကြသည်။
ဘာလဲဖြစ်ပါသည် stanozolol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်?
Stanozolol အမှုန့်, Stanozolol များ၏ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်အမှုန့်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, CAS ဖြစ်ပါသည်: 434-07-1, Molecular ဖော်မြူလာ C21H32O3, Molecular အလေးချိန်: 332.48, အရည်ပျော်မှတ်: 172-180 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, Stanozolol များသောအားဖြင့်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
stanozolol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဝယ်နည်းလမ်းနှစ်ခု: တစ်ဆိုင်မှာသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းခုနှစ်တွင်?
ယေဘုယျအားဖြင့်လူတွေဟာသူတို့ကဒေသခံဆိုင်ထဲမှာလိုခငျြစတီရွိုက်ကိုဝယ်နိုင်ပေမယ့်အင်တာနက်ကို fastl ဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်, အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက်သာလွန်လမ်းဖြစ်လာသည်။ ယနေ့ခေတ်လူတွေဟာ ပို. ပို. ရိုးရာစတိုးဆိုင်မှနှိုင်းယှဉ်, အွန်လိုင်း stanozolol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်, အထူးသဖြင့်အမှုန့်, ​​အမြောက်အများအမှုန့် stanozolol ဝယ်ဖို့, အွန်လိုင်း sterodis ဝယ်ဖို့လေ့, အွန်လိုင်းဝယ် stanozolol ပိုပြီးအားသာချက်ရှိ, အွန်လိုင်းဝယ်ယူမျိုးကိုပိုပြီးဖြစ်ပါသည်, အလွယ်တကူနှိုင်းယှဉ်၏လျော့နည်းကုန်ကျစရိတ် စောင်ရေများနှင့်စတိုးဆိုင်များ, stanozolol စျေးနှုန်းပိုပြီးတတ်နိုင်နှင့်အဆင်ပြေပြေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ကြသည်။
ဘယ်မှာမှ အွန်လိုင်း stanozolol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်?
တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော steroids ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရွေးချယ်ရာတွင်အလွန်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဤပုံကိုတစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့် stanozolol ရွေးချယ်ဖို့, ကျနော်တို့မကြာခဏအလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သောအမှုထင်ရှားစေခြင်းငှါ, အွန်လိုင်း stanozolol မိန့်အခါဖြစ်ပါသည်, များသောအားဖြင့်အတုကုန်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စံထက်ဝေးအောက်ပိုင်းဖြစ်ပါသည် လိုအပ်သော။
သငျသညျပြီးသားသင့်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှိပါက, အဲဒီနောက် fine.If မဟုတ်ဘူး, ဒီမှာသင်တို့၏ကောင်းသောရွေးချယ်မှု, AASraw လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့်စတီရွိုက်ရောင်းချသူအဘို့, အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်အရေအတွက်ထောက်ပံ့ရေးသေချာနိုင်သည့်, ထောက်ပံ့ရေးတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ်အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေလိုသူ, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖို့ရန်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်တယ်, AASraw ဖြစ်နိုင်ပါစေ။
ဘာဖြစ်သလဲ AASraw ကုမ္ပဏီ?
AASraw ထဲကဓာတုပစ်စညျးနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက် 2008 တရုတ် Ph ကတည်ဆောက်ခဲ့သည့်5အတွက်ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအင်ဂျင်နီယာဓာတ်ခွဲခန်းကပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ။ Tulsa, ဥက္ကလာဟိုးမားတက္ကသိုလ်များတွင်ဓာတုအင်ဂျင်နီယာမှာ majored သူဆရာဝန်များ, USA.We ထောက်ပံ့ရေး 99% puirty Steroid တစ်မျိုးကုန်ကြမ်းအမှုန့် ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းကိုမြန်ဆန်ပေးပို့နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ payment.Main ထုတ်ကုန်တော်တော်လေးအပြိုင်အဆိုင်နှင့်အတူ: ဟို steroids ကုန်ကြမ်းအမှုန့်, ကာယဗလ, ကြံ့ခိုင်ရေး, အဆီဆုံးရှုံးမှု, လိင်ဟော်မုန်း, SARMS, ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးဝါး, HGH, Homebrew, testosterone enanthate 90USD / 100g အဖြစ် ugl.Such , အရည်အသွေးမြင့် Clen HCL, sibutramine Insight web studio ၏။
4182 Views စာ
ကာယဗလများအတွက် Stanozolol အမှုန့်: သင်သိသင့် 16 အချက်အလက်များ !!!
Stanozolol- ထိပ်တန်းကာယဗလများအတွက် steroids ရောင်း !!!
Stanozolol- ထိပ်တန်းကာယဗလများအတွက် steroids ရောင်း !!!	Modafinil: အရည်အသွေးမြင့် Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိ